29 | March | 2013 | Danya Wadi
By danyawadi March 29, 2013 Leaveacomment
ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် မီးထွန်းဆုတောင်းပွဲ လေး အောင်ြမင်စွာပြီးဆုံးသွား ပါပြီ။မန္တလေးမြို့သာမက မြန်မာ ပြည် မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းအေးချမ်း ကြပါစေ။အကြမ်းဖက်မှုများကင်းစင်ြကပါစေ။ အဓိကရုဏ်းတွေမှာ အာဏာပိုင်တချို့ ပတ်သက်မှုရှိတယ်လို့ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ပြော လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ မူဆလင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအကြား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု တချို့မှာ အာဏာပိုင်တွေ ပါဝင်ပတ်သက်မှု တစ်စုံတစ်ရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်တွေ မိမိရရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Tomas Ojea Quintana က မနေ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူအုပ်စုက အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးနေတာကို ရဲတပ်ဖွဲ့၊ စစ်တပ်နဲ့ အရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တချို့က သူတို့မျက်စိရှေ့မှောက်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာကို ရပ်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေရရှိကြောင်း မစ္စတာ Quintana က ပြောလိုက်ပါတယ်။ မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းအပါအဝင် လတ်တလော ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ […]
ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ အရေးပေါ်အကူ အညီတွေလို အပ်နေကြောင်း ကုလ သမဂ္ဂပြောကြား
ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂပြောကြား ========================== March 29, 2013 လာမယ့် မေလ မုတ်သုန်ရာသီမစခင် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ နေထိုင်နေကြရတဲ့ နေရာရွှေ့ပြောင်းခံရသူ တစ်သိန်းခွဲနီးပါး အတွက် အရေးပေါ်အကူအညီ အစီအမံတွေ အမြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြောပါတယ်။ မကြာခင်က မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးမှူး မစ္စတာ John Ging က ဒုက္ခသည်တွေဟာ လယ်ကွင်းတွေထဲမှာ စခန်းဖွင့်ပြီး နေထိုင်နေကြရတာကြောင့် မိုးရာသီ ရောက်တာနဲ့ ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်၊ သူတို့ကို နေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့လိုလာသလို၊ နေရပ်ပြန်ရေး၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်ရေးတွေအတွက်လည်း ဖြေရှင်းပေးဖို့လိုလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါမှ သူတို့ဘာသာသူတို့ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ပြန်ပြီး စတင်ထူထောင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ နယူးယောက်မြို့ မှာ သတင်းထောက်တွေကို […]
ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာချိတ်ပြီး Internet သုံးမယ်ဆိုရင် ဖုန်းများကိုကွန်ပျူတာဖြင့် ချိတ်ဆက်သုံးရန် ရည်ရွယ်ပါက… ဂျီအက်အမ်ဖုန်းများ အတွက်လည်း 3G ပါသောဖုန်းကို သာရွေးစေလိုပါသည်။ EDGE ရိုးရိုးဂျီအက်အမ် အချက်အလက်ဖြတ်သန်းမှု အင်တာနက် နည်းပညာအတွက် ယခုဖုန်းများသည် 2.75 gb သာရသေးသဖြင့် အနည်းငယ်နှေးပါသည်။ 3G ဟန်းဆက်ဖြစ်ပါက အင်တာနက်သုံးခါနီးတွင် နက်ဝပ်အမျိုးအစားတွင် 3G ပြောင်းသုံးပါက ယခုတချို့နေရာများတွင် 3.5G ဟုမိလာပြီး တော်တော် အဆင်ပြေပါသည်။ 3G အတွက် High speed data mode သို့မဟုတ် UMTS ဟုရေးထားပါသည်။ Data Transfer Rate အချက်အလက်ဖြတ် သန်းမှုနှုန်းမြန်သဖြင့် Download လုပ်ရန်ရှိပါက အဆင်ပြေပါသည်။ အချို့နေရာများတွင် 3G မမိပါက 2G EDGE ဖြင့်သာသုံးရပါသည်။ […]
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် ၁/ ၂၀၁၃ ကိုထုတ်ပြန် (ပဋိပက္ခကိစ္စ)
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် ၁/ ၂၀၁၃ ကို ဒီနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ကနေ ဒီနေ့အထိ မြို့နယ် ၁၅ မြို့နယ်မှာ လူစုလူဝေးဖြင့် အကြမ်းဖက်မှု ၁၆၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၄၃ ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ၈၆ ဦးရှိကြောင်း၊ အဆောက် အဦ ၁၃၅၅ လုံး နဲ့ ယာဉ်မျိုးစုံ ၃၉ စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးကြောင်း၊ လူဦးရေ ၁၁၃၇၆ ဦး အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၆ ခုမှာ လူဦးရေ ၉၀၆၅ ဦးကို စောင့်ရှောက် ထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ ၆၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိပြီး ဥပဒေနဲ့ အညီအရေးယူရန်ဆောင်ရွက် နေကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ […]
အီဂျစ်လက်ရှိအာဏာရပါတီမှဒေါက်တာ ဂမားလ်ဟရ်ှမတ် “မြန်မာမွတ်စလင်”အရေး ကမ္ဘာကြီး နိုးကြားဖို့ ပြောကြား …
March 28, 2013 အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမှုများ၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များနှင့် အိုးအိမ်များကို မီးရှို့ကာ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခံနေရခြင်း များဖြင့် မြန်မာမွတ်စလင်များ (Myanmar Muslims) နေ့ စဉ်နှင့်အမျှ ခက်ခဲကြီးစွာ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရသော အသက်အန္တရယ်နှင့် အလုံးစုံးပျက်စီးမှုများကြောင့် အီဂျစ်နိုင်ငံ (Egypt) လက်ရှိအာဏာရအစိုးရပါတီ Freedom and Justice Party (FJP) ၏ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ဂမားလ်ဟရ်ှမတ် (Dr. Gamal Heshmat) က နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအား မြန်မာမွတ်စလင်တို့ လူ့အခွင့်အရေး အပြင်းအထန် ချိုးဖောက်ခံနေရခြင်းကို စုံစမ်းစစ်စေးရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ “မြန်မာမွတ်စလင်တွေ (Myanmar Muslims) ဟာ ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး ခွဲခြားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်၊ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်း (genocide) အန္တရယ်ကို ထပ်ဖန်တလဲလဲ […]
လက်ရှိအကြမ်းဖက်မှုများမှာဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက် များကြောင့်ဟု သမ္မတ အကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင် ဝန်ခံ
March 29, 2013 Ko Ko Hlaing, chief political advisor to the president of Burma, acknowledged problems with Buddhist extremists in Burma in an interview with VOA. “Yes, there’re some very extremist elements in the Buddhist societies,” he said. “But, now many prominent Buddhists, senior monks they are coming to the sites of the events and, […]
မြစ်ကြီးနားတွင် ၅၀၀၀ တန် ငွေစက္ကူအတုများ ဖမ်းဆီးရမိ …
မတ်လ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၃ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ ၊ ကျွန်းပင်သာရပ်၊ ဆိုင်ကယ်ဆိုင်တစ်ခုတွင် ယမန်နေ့က ၅၀၀၀တန်ငွေ စက္ကူအတုများ ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ယမန်နေ့ နံနက် ၁၁နာရီခန့်တွင် ကျွန်းပင် သာရပ်ရှိ ဆိုင်ကယ် ဆိုင်တစ်ခုတွင် ဆိုင်ကယ် ၀ယ်ယူရန်ရောက်လာသူ ၃ဦးထံမှ ၅၀၀၀တန်ငွေစက္ကူအတု ၂၄၈ရွက် (၁၂၄၀၀၀၀) ကျပ်အား သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း သိရှိရပါ သည်။ ဖမ်းဆီးရမိသူ(၃)ဦးကို စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး ငွေတုများကို ပေးဆောင်သူ(၃)ကို နဂါးနှစ်ကောင်ဟိုတယ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိကား ၎င်းတို့ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်အရ ကျန်သည့် ငွေတုများကို သိမ်းစည်း ထားသည့် သူကို ထပ်မံ စစ်ဆေးရှာဖွေရာ မြေမြင့်ရပ်ကွက်နေသူတစ်ဦး၏ လယ်ကွင်းအတွင်း တွင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ဖြင့်စွန့်ပစ်ထားသော (၅၀၀၀) တန်အတု အရွက် (၆၀၀) ငွေ […]